बिजनेस होम – Page 296 – rastriyakhabar.com
लौ भेटियो महापृथ्वी !
बिहिबार, जेष्ठ २९, २०७१ मा प्रकाशित
लण्डन- खगोलशास्त्रीहरुले ब्रह्मान्डमा अहिलेसम्म खोजिएका ग्रहहरु मध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रह पत्ता लगाएका छन् । भर्खरै पत्ता लगाइएको ग्रहको वजन पृथ्वीभन्दा १७ गुणा बढी र आकारमा दुई गुणा ठुलो छ । यस्को आकार प्रकार र ढुंगेरुप अनुसार यस्को नाम ‘गोडजिला अफ वर्ल्ड’ राखेका छन् । तर यस्को बैज्ञानीक नाम चैं..
इन्द्रावतीबाट पानी तानेर पाँचखालमा सिँचाइ पुर्‍याइने
काठमाडौ, २९ जेठ । व्यावसायिक तरकारी खेतीको मुख्य 'हब' भए पनि काकाकुल काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा अबको दुई वर्षपछि सिँचाइका लागि पानीको अभाव हुने छैन । सरकारले राजधानीमा सबैभन्दा बढी तरकारी आपूर्ति गर्ने पाँचखालमा सिँचाइ गर्न इन्द्रावती नदीबाट पानी तानेर ल्याउन 'लिफ्ट इरिगेसन' आयोजना निर्माण गर्ने..
काठमाडौँ,२९ जेठ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबार को लागी सुनको मुल्य प्रतितोला ५१ हजार ६ सय तोकेको छ । महासंघका अनुसार मंगलवार नेपाली बजारमा सुन प्रतितोलाको ५१ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा..
के साँच्चै सुन्दर देखिएला त काठमाडौँ, त्यो जताततै तारको गुजुल्टो हट्ला?
बुधबार, जेष्ठ २८, २०७१ मा प्रकाशित
फोटो काठमाडौँको एउटा खम्बाको हो। खिच्ने विदेशी हुन्, विल र एलेक्स। ट्राभल ब्लग डट ओआरजी मा यो फोटो भेटिएको..
नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण बढेर झन्डै ३३ हजार रुपैयाँ
काठमाडौँ ,२८ जेठ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण बढेर झन्डै ३३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले ३० वटा वाणिज्य बैंकले कुल आठ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या अहिले दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार छ । कुल ऋणलाई अहिलेको जनसंख्याले..
पत्रकारको सुरक्षाको दायित्व विषयक अन्तक्रिया सम्पन्न
प्रकाश धौलाकोटी, तेह्रथुम जेठ । तेह्रथुमको म्याङलुङमा पत्रकार सुरक्षाको लागी सुरक्षा निकायको दायित्व विषयक १ दिने अन्र्तक्रिया मंगलबार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा युनेस्को काठमाण्डौ पत्रकार सुरक्षा कार्यक्रमका संयोजक लक्ष्मण दत्त पन्तले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा विषयक..
पेट्रोलियम पदार्थ डिपोमा नपुर्‍याई बाटोमै चोर्ने गिरोह पक्राउ
मङ्लबार, जेष्ठ २७, २०७१ मा प्रकाशित
काठमाडौं,२७ जेठ । नेपाल भित्र्याइएको पेट्रोलियम पदार्थ डिपोमा नपुर्‍याई बीच बाटोमै चोर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ। रक्सौलबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने डिजेल बाटोमै चोर्ने-चोराउने गिरोहलाई प्रहरीले सोमबार अपराह्न बाराबाट पक्राउ गरेको हो। यसअघि रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै नेपाल आयल निगम..
बचत तथा ऋण सहकारीहरु बन्द गरिनुपर्छ : गृहमन्त्री
काठमाडौं, २७ जेठ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सरकारी नीतिको अभावका कारण घरेलु तथा साना उद्योगको विकाश राम्रोसँग हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २१औं वार्षिक साधारणसभालाई सोमबार सम्बोधन गर्ने क्रममा गृहमन्त्री गोतमले जनतालाई ठगी गर्ने र दलाली गर्ने काम..
नोटमा कोरे, स्टिच लगाए कारबाही
सोमवार, जेष्ठ २६, २०७१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ,२६ जेठ । नोटमा केरमेट र स्टिच लगाएर बिगार्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले नोटमा केरमेट गर्नेलाई आर्थिक जरिबाना र नोटका बिटामा स्टिच लगाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सेवाबाट निलम्बनसम्मको कारबाही गर्ने भएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७/६८ को..
सुटकेसमा कपडा प्याक गरि गन्तव्यमा जानुहोस्
(एजेन्सी)– चीनको हुनान प्रान्तका एक किसानले एउटा यस्तो सुटकेस बनाएका छन् जसमा तपाईं आफ्नो कपडा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमाथि चढेर आफ्नो गन्तव्यमा पनि जान सक्नुहुन्छ । ताइवानको वान्ट चाइना टाइम्स पत्रिकाका अनुसार यो मेसिनको पछाडि दुईवटा पाङ्ग्रा राखिएको छ भने अगाडि भागमा एउटा पाङ्ग्रा रहेको छ ।..
चालु आवसहित पाँच वर्षको समेत रकमान्तरको विवरण पाँच दिनभित्र प्रस्तुत गर्न माग
काठमाडौँ ,२६ जेठ। व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले चालु आवमा भएको रकमान्तरको विवरण सम्बन्धित निकायसँग पाँच दिनभित्र माग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै पाँच वर्षका रकमान्तर र थप निकासको विवरणसमेत माग गरी समितिको अर्को बैठकमा छलफल गरिने भएको छ । बैठकले चालु आवमा विभिन्न मन्त्रालय,..
अर्थमन्त्री कर्मचारीको तलब बढाउन उदार ,एक दिनको एक ग्रेड र एक हजार भत्ता तलबमा गाभिने
आइतवार, जेष्ठ २५, २०७१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ,२५ जेठ । निजामति कर्मचारीको तलब बढाउने गरि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण कार्यमा तीब्रता दिएको छ । निजामति कर्मचराीहरुको माग बमोजिम एक दिनको तलब बरारब एक ग्रेड दिन अर्थमन्त्री सकारात्मक भएको समेत अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । शुरुमा अर्थमन्त्रालयले खर्च धान्न नसकिने भन्दै यसबारेमा..
रेडियो नाटक संगोर श्रृखलाको पुनः आरम्भ हुने
प्रविण अग्रवाल /रौतहट २५ जेठ । मैथली रेडियो नाटक संगोर श्रृखलाको पुनः आरम्भ हुने तय भएको छ । मैथली नाटकको आयोजक नयाँ संसार सुनसरी नामक सँस्थाले गौर स्थित सियापैलेमा एक कार्यक्रमको आयोजना बिच सो जानकारी गराएको हो । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको अध्यक्षतामा सम्मपन भएको कार्यक्रमका नायक,..
एनसेल कैम्पमा ग्राहकको घुईचो
शुक्रबार, जेष्ठ २३, २०७१ मा प्रकाशित
प्रविण अग्रवाल/रौतहट २३ जेठ । संचार क्षेत्रमा ग्राहकको पहुँच सम्म छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको एनसेल मोबाईलले रौतहटको गौरमा अस्थाई कैम्पको आयोजना गरेको छ । दुई दिनको लागि लगाइएको उक्त कैम्पबाट पाँच सय भन्दा बढि ग्राहक लाभान्वीत भएको एनसेलका र्कोरपरेट संचार विज्ञ मिलन शर्माले बताएका छन्..
जापानले बनायो मुटु र इमोसन भएको रोबोट
जापानमा यस्तो रोबोट बनेको छ जसले मान्छेको इमोसन -संवेदना) थाहा पाउन सक्छ । जापानी कम्पनी सफ्टब्यांकले पिपर नामको उक्त अत्याधुनिक रोबोट निर्माण गरेको हो । विश्वकै पहिलो मानिएको यो रोबोटमा इमोसनल इन्जिन तथा डाटा सुरक्षणका लागि क्लाउड बेस्ड खुफिया प्रणाली छ जसले मानिसको सरीरको हाउभाउ, प्रतिक्रिया तथा..